China mpamorona andian-tsarimihetsika vita sokitra vita amin'ny alimina | Chenyu
Ny veneer vita amin'ny aluminium vita amin'ny lavaka dia afaka manitatra hatrany ny takelaka fisaka amin'ny fahatsapana habaka, ary manana ny fiasan'ny hazavana sy ny rivotra. Ny collocation ny endriny sy ny haben'ny bikan'ny lavaka somary maranitra sy matevina dia mampihetsi-po ny velaran'ny zavatra, atambatra amin'ny endrika sy tontolo samihafa ho an'ny fanodinana endrika manokana, mahatonga ny tsipika ho velona sy kanto kokoa.
Izy io dia mamaky ny hevitra maodely mahazatra ary manokatra toerana fisainana tsy misy farany ho an'ny fianakaviana lamaody mavitrika. Izy io dia endrika haingon-trano vaovao izay sady azo ampiharina no tsara tarehy.
1. Raha ampitahaina amin'ny ravina seramika, vera ary fitaovana hafa, ny veneer aluminium dia manana lanja maivana, tanjaka avo, henjana tsara ary mora fikarakarana.
2. Fametahana ambonimbony Noho ny firakotra PVDF dia manana fanoherana tsara ny toetr'andro sy fanoherana UV, loko maharitra sy gloss maharitra, fanoherana ny harafesina tsara ary azo ampiasaina amin'ny toe-javatra masiaka -50 ° C -80 ° C.
3. Ny fanoherana asidra sy alkaly tsara .PVDF firakotra indrindra ny Akzo Novel no fonosana tsara indrindra ampiasaina any ivelany amin'izao fotoana izao.
4. Fampisehoana fanodinana tena tsara, mora tapaka, mandroso, miondrika, azo volavolaina sy mora apetraka eo amin'ny toerana.
5. Ny fanamafisam-peo sy ny fahombiazan'ny fihoaram-pefy dia tsara, ary azo totohondry amin'ny fomba rehetra amin'ny veneer aluminium. Ny landihazo mandrehitra ny feo, ny volon'ondry vato ary ny fitaovana hafa mahazaka feo sy miaro hafanana dia azo ampidirina ao aorina, izay manana faharetan'ny lelafo ary tsy misy setroka misy poizina raha misy ny afo.
6. Ny loko azo voafantina malalaka ary tsara tarehy ny loko.
7. Mora ny manadio sy mitazona, ary mahafeno ny fepetra fiarovana ny tontolo iainana.
Ny singa amin'ny tontonana aluminium
(1) Ny lozisialy vita amin'ny aliminioma dia vita amin'ny andian-dahatsoratra 1100 na andian-dahatsoratra aliminioma 3003, izay zahana amin'ny hiondrika, famafana, fanamafisana ny taolan-tehezana ary ny zoro voavola.
(2) Fametahana ambonin-javatra: ny firakotra PVDF dia ampiasaina amin'ny applicaion ivelany, ary ny famaranana ny vovo na ny vovoka dia ho an'ny haingon-trano ao anaty.
(3) Ny hatevin'ny veneer aluminium any ivelany dia 2.0mm, 2.5mm na 3mm; ho an'ny haingon-trano na valindrihana anatiny, ny savony matevina 1.0mm na 1.5mm dia somary OK.
Teo aloha: Vato vita amin'ny alim-pito
Manaraka: Tontonana plastika vita amin'ny alim-bolo